प्रचण्डलाई बुझ्न नसकेका मानिसले त्यस्तो टिप्पणी गरे : विष्णु पौडेल [भिडियो अन्तर्वार्ता]
विष्णु पौडेल नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हुन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पौडेलले नेपालको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महासचिवको जिम्मेवारी पाए । बिहीवार मात्र नेकपाको महासचिव बनेका पौडेलसँग पार्टी एकता, आगामी कार्यदिशा र शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा भएको सहमतिबारे लोकान्तरका लागि विमल गौतम र सुशील पन्तले शनिवार कुराकानी गरेका छन् ।
दुईदिन अगाडिसम्म शीर्ष नेताहरूको फरक–फरक अभिव्यक्ति सुनिथ्यो, बिहीवार एकाएक पार्टी एकता भयो । यो कसरी सम्भव भयो ?
एकाएक होइन, सुविचारित, योजनाबद्ध, सघन गृहकार्यको परिणामको रूपमा पार्टी एकता सम्पन्न भएको हो । एकता प्रयास जे जति भइरहेका थिए, जे जति गृहकार्य भइरहेको थियो सबै सूचना पर्याप्त मात्रामा सम्प्रेषित थिएनन् । त्यसैले मानिसहरूले फरक–फरक अनुमान गरे । यथार्थमा प्रारम्भदेखि एकताका लागि अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ प्रयास अगाडि बढाएका हौँ । हाम्रो प्रयासको स्वभाविक परिणाम हो, पार्टी एकता ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उनको राजनीतिक भविष्यप्रति आश्वस्त हुन खोजका कारण एकता प्रक्रिया लम्बिएको भन्ने कुरा आएको थियो । अन्तिममा कुन सहमतिले उहाँलाई आश्वस्त बनायो ?
यो हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझ्न बाँकी रहेका मानिसहरूले गर्ने टिप्पणी हो । उहाँ आफ्ना लागि मात्र आश्वस्त रहने नेता होइन । मुलुकका लागि, जनताका लागि आश्वस्त हुन चाहने नेता हो । मुलुकको भविष्यप्रति, राष्ट्रको भविष्य र जनताको भविश्यप्रति आश्वस्त हुन चाहने नेता हो । यसै पनि उहाँको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी रहँदै आएको छ, रहिरहने छ । त्यसकारण उहाँले आफ्नो भूमिका खोज्नुभयो भनेर जुन कोणबाट चर्चा भए, यो चर्चामा सत्यता छैन ।
महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको आलोपालको कुराले गर्दा ढिला भएको भन्ने सुनिथ्यो नि !
भनिथ्यो, हामीले पनि सुन्यौं । बाहिरका रिर्पोटिङ सुन्दा कतिपय कुराहरू मनोरञ्जन दिने खालका थिए । यथार्थमा कुनै पदका लागि केन्द्रित भएर एकता गरिएको होइन । मुलुक र जनताको भविष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सुदृढ र स्थिर सरकार निर्माण गर्ने, मुलुकलाई समृद्धितर्फ लिएर जाने, जनताका यावत समस्यालाई समाधान गर्ने अनि छोटो र छिटो तरिकाले देशलाई विकासको मार्गमा लिएर जाने । समृद्धि, समाजवादतर्फ मुलुकलाई लिएर जाने उद्देश्यका साथमा गरिएको एकता हो ।
भित्र शीर्ष नेताहरूको बीचमा पावर शेयरिङ (पद बाँडफाँड)का बारेमा कुनै सम्झौता भएको छ भने खुलाइदिनुस् न ।
पावर शेयरिङ दुईवटा फरक पार्टी वा दुई फरक समूहबीचको सहकार्यका अभ्यासमा प्रकट हुने विषय हुन् । हामी दुईवटा फरक पार्टी छैनौं अब । नेकपा हौं आज हामी । त्यसले गर्दा यहाँ कुनै पावर शेयरिङ भन्ने प्रश्न हुन्न । सबै नेतालाई उहाँहरूको इतिहास र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढ्छौं । त्यसकारण मैले दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु – हाम्रा नेताहरू कमरेड केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा आफ्ना निजी हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पद बाँडफाँडका कुरा गर्नुभएको छ कि भन्ने कुरा सही होइनन् । उहाँहरूलाई त्यसरूपमा बुझ्ने कुराले उहाँहरूप्रति अवमूल्यन हुन्छ भन्ने म ठान्छु ।
त्यसो भए पावर शेयरिङको विषयमा कुनै गोप्य सहमति भएको छैन ?
छैन, छैन । त्यसमा केही भएको छैन । महाधिवेशनबाट के गर्ने भन्ने व्यक्तिको हितलाई होइन, आन्दोलनको हितलाई सोचेर एकता गरेका छौं । सिंगो देश, समाज र पार्टी हित अनुकूल हुने हिसाबले हाम्रा तमाम गतिविधि अघि बढ्नेछन् ।
तल्लो तहसम्म भिजेका र स्थापित दुई पार्टी एक भएका छन् । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म व्यवस्थापनका चुनौती के देख्नुभएको छ ?
व्यवस्थापनको चुनौती भन्दिन म, त्यसलाई व्यवस्थापनको अभिभारा भन्छु । हामीले दुईवटा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेका छौं । एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको छौं । केन्द्रीय तहमा एकता गरेका छौं । अब तलसम्म सम्पन्न गर्छौं । पार्टी निकटका जनवर्गीय संगठनलाई पनि एकताबद्ध गर्दै र एकताको समग्र श्रृंखलालाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउँछौं । यो चुनौती होइन, अभिभारा हो ।
आन्दोलनका लागि योगदान दिएका या दिनसक्ने, इतिहास भएका सबै नेता कार्यकर्ता र सदस्यलाई उपयुक्त जिम्मेवारीका साथ पार्टीको झण्डा, पार्टीको विचार बोकेर गौरवका साथ काममा खट्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्छाैं । यो जिम्मेवारी हो हाम्रो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं । यसलाई चुनौतीको रूपमा बुझ्न चाहान्नँ ।
पार्टी एकतापछि तपाईंलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएपछि धेरैले योग्य भनेको पाइयो । कतिपय पार्टीभित्र केही शीर्ष नेतालाई पाखा लगाएकोमा तिक्तता छ भन्ने पनि सुनिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो चाहिँ पार्टी एकता संयोजन समितिले प्रस्ताव गर्‍यो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर भएको हो । मैले कहीँ पनि विमति, असहमति या विरोध भन्ने सुनेको छैन ।
एउटा हामीकोमा के छ भने निर्णय भइसकेपछि यस्तो छ कि उस्तो छ कि भन्ने आशंका गरिन्छ । जस्तो अहिले आइरहेको छ नि, हिजोसम्म कहाँ मिल्छन् यी पार्टी ? एमाले–माओवादी मिल्छन् ? केपी ओली र प्रचण्ड मिल्छन् ? भनेर कतिपयले टिप्पणी गर्दथे, त्यसैमा रमाउँथे । अब हामीले सुन्दैछौं, अहिले कहाँ मिलेका छन् र यिनीहरू ? भत्किन्छन्, फेरि धुजाधुजा हुन्छन्, भनेर टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
कसैलाई यस प्रकारको सस्तो टिप्पणी गरेर आनन्द लिन मन छ भने (बिमलजी) उनीहरूलाई आनन्द लिन दिनुपर्छ । यसमा तपाईंले प्रश्न सोध्ने र मैले जवाफ दिने ढंगले समय खर्चिन जरुरी छैन ।
अन्त्यमा, एकीकृत पार्टीको चरित्र विगतको एमाले र माओवादीको भन्दा कसरी फरक हुन्छ ?
हामीले हाम्रो सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विचारहरूलाई व्यवस्थित गरेका छौं । राजनीतिक प्रतिवेदनको रूपमा त्यो लिपिबद्ध गरिएको छ । हाम्रो समग्र पार्टीको निर्माण र सञ्चालनका सम्बन्धमा हामीले एउटा वैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ । अन्तरिम विधान छ । त्यो विचारले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ । यो विधानबमोजिम हामी हाम्रा यावत संगठनात्मक राजनीतिक काम र आचरणलाई परिभाषित गर्छौं । त्यसकारण स्वभावैले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र इतिहासका महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका पार्टी हुन् । ती पार्टीले आ– आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्ने क्रममा राष्ट्रिय राजनीतिमा जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा असाधारण र अतुलनीय योगदान गरेका छन् ।
यी पार्टीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यस हैसियतमा थिए । आज ती दुईवटा पार्टी मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हामी संगठित भएका छौ । विरासतमा हामीले चाहे नेकपा एमालेको झण्डाअन्र्तगत आर्जन गरिएका उपलब्धि, विचार र मान्यता हुन्, चाहे नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा आर्जन गरिएका उपलब्धि, विचार र मान्यता, हामी तीनलाई निरन्तरता दिन्छौं ।
हामी स्वभाविक रूपमा एउटा सही विचारको सुदृढ संगठनको रूपमा देशलाई लामो समयसम्म समृद्धि, समाजवादतर्फ लिएर जाने अभियानको अगुवाई गर्दै पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौं ।
पौडेलसँगको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्, भिडियोमा :
शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका शालीन महासचिव, जो सधैं पुल बनिरहे
पौडेल महासचिव बनेपछि रुपन्देहीमा उत्साह, प्रधानमन्त्री बनेको हेर्ने चाहना
जेठ ५, २०७५ मा प्रकाशित